बलात्कार र हिंसाले श्रीङ्गरिदै नयाँ नेपाल – doodhmati || dudhmati
Home / विचार / बलात्कार र हिंसाले श्रीङ्गरिदै नयाँ नेपाल
Sujeet Jha September 21, 2018	विचार 910 Views
तराई हाम्रो सुनको टुक्रा, हिमाल हिराको
माटो र पानी पहिलो धन धर्ति को छोरा को
पौरखी हाम्रा पुर्खाको पाईला मेटेर मेटिन्न
राष्ट्रकवि माधव घिमिरेले लेख्नु भएको कविता नेपाले नरहे को यी दुई हरफले नेपालको इतिहास र सुन्दरतालाई सरल शब्दमा सहज ढंगले बर्णन गरिएको पाइन्छ । धेरै जसो साहित्यकारहरु को लेख रचनाहरुमा नेपालको प्राकृतिक सुन्दरताको गुनगान गरेको पाइन्छ ।
नेपाल शब्द को पर्याय शान्ति, अहिंसा, बिरता आदि इत्यादि हो भन्ने कुरा लेखेको, सुनेको पाइन्छ. विभिन्न जात, धर्म, भाषा, समुदायका मान्छे एक आपसमा पारस्परिक सहयोग, सदभावले नेपालमा बसोबास गर्छन भन्ने कुरा सारा संसारले जानेकै कुरा हुन । जुन देशमा महिलालाई सबै भन्दा ठुलो दर्जा दिईन्छ, देबी को स्वरूप मानिन्छ, पूजा गरिन्छ , त्यही देशमा आजभोली महिला लाई दानवता को शिकार बनाईदै छ ।
दिनहु महिला हिंसा, बलात्कार, बालबालिका माथि दुव्र्यवहार,अत्याचार , अपहरण आदि जस्ता कुराहरुले आफ्नो स्थान पत्रपत्रिका , सामाजिक संजालहरु मा ओगेटीरहेका छन् ।
केही महिना अगाडी मात्रै बोक्सीको आरोपमा एक महिला लाई कुटपिट गरियो भन्ने कुरा खुब चर्चामा रह्यो, सामाजिक संजालमा पनि निकै दिन सम्म यस बारे लेखियो , दोषी लाई ढिलो चाडो समातियो पनि तर यस प्रकारको घटनाहरु अझै रोकिएको छैन । फेरी केहि दिन अगाडी कञ्चनपुरकी १३ बर्षिया बालिका निर्मला पन्तको निर्ममता पुर्वक बलात्कार गरी हत्या गरियो । यो खबरले फेरी देश भरीको महिला सुरक्षा माथि प्रश्न खडा गरेको छ । तर उसको लागि आगाडी आएर न्याय मागि दिने, आवाज उठाइ दिने काम कसैले गरेको पाइदैन । केहि मान्छे ले बिरोध प्रदर्शन र आवाज उठाउँदा राज्यबाट उपहार स्वरूप गोलि चलाएर एक निर्दोष बालक को हत्या समेत गरियो र त्यस पछाडी यो घटना पनि सेलायो । ठुला ठुला मान्छेको नातेदारको संलग्नतामा भएको यस घटना लाई जसरी पनि बन्द गर्न खोजियो ।
आवाज उठाए ज्यान गुमाईन्छ भन्ने डरले आवाज नउठेपछि यस्ता अपराधीहरुको मनोबल झन् बलियो हुदै गईरहेको छ । यी घटनाहरु नेपाली जनताले सहजै पचाउँदै छन् अब । अब यस्ता घटना को बिरुद्धमा आवाज उठाउने न त कसै संग समय छ न त हिम्मत नै । हाम्रो नयाँ नेपालको बीरताको नौलो परिभाषा के यही हो अब ?
ठाउँ अलग, परिवेश अलग, समय अलग तर घटनाको प्रकार उही चलि रहेको छ । फेरी पनि कति महिलाहरु यस्ता दानबको चपेटामा परि रह्ने छन् र आफ्नो ज्यान गुमाई रह्ने छन् । के त्यो बोक्सीको आरोपमा पिटिएकी महिला, बलात्कृत निर्मला आदि जस्ता घटनामा परेर आफ्नो ज्यान गुमाएकाहरुको दोष महिला भएर जन्मिनु हो वा नेपाल मा जन्मिनु हो ? यो प्रश्न को उत्तर राज्यले दिनै पर्छ ।
नेपालको सिंगो सुरक्षा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, सरकार माथि जतिसुकै प्रश्न उठेपनि, दबाब परेपनि मौन बसिराख्ने अब चलन चलिसकेको छ । अनुसन्धान र न्याय को नाममा तारिख र गालि मात्र पाइन्छ न्यायलय र प्रहरी बाट । कुनै घटना को चर्को बिरोध भएमा आवाज बन्द गराउन, क्षतिपूर्ति त घोषणा गरिन्छ तर न्याय दिईदैन । शान्तिको पर्याय नेपालमा अब शान्ति को परिभाषा श बाट शोषण, नि बाट निर्ममता ले हिंसा र त बाट ताण्डब भैसकेको छ.
जताततै यस्ता अपराधीक घटना घटीरहेको बेला यस्ता समस्या लाई समाधान गर्न छोडेर हाम्रो सरकार त्यो भन्दा बढी महत्वपूर्ण काम जस्तै विदेश भ्रमण, बिदेशी पाहुनाहरु को स्वागत र सुरक्षा, पानी जहाज चलाउने आदिमा तल्लिन देखिन्छन् । नेपालको सुरक्षा व्यवस्थाको काम अब जनताको सुरक्षा छोडेर भिआईपीहरु लिए सुरक्षा दिनेमा सिमित भैसकेको छ । सुखद र सहज जिवन बाँच्नका लागि मान्छेको पहिलो आवश्यक्ता भोजन, आवास र सुरक्षा हो भन्ने कुरा शायद सरकारले बिर्सेर्को छ । जुन देशले आफ्नो नागरिकलाई सुरक्षाको अनुभूति गराउन सक्दैन त्यो देश बीरताको प्रतिक कसरी ? यस्तै घटनाको शृंखला चलिरह्यो भने त्यो दिन पनि टाढा छैन जब हाम्रो राष्ट्रिय गान बज्दा समेत मनले गाउन मान्दैन र लाजले हरेक जनता को टाउको निहुरिएको हुन्छ । नेपाल सरकारले यथाशीघ्र सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त बनाउनु पर्छ र सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरुले अब आफ्नो जिम्मेबारी बुझेर सही ढंगले जनताको सुरक्षा दिदा मात्र फेरी नेपाल असल शान्ति को पर्याय बन्नेछ । जुन दिन देखि यस्ता अपराध को शृंखला बन्द हुनेछ नेपाल त्यही दिन विकाश तर्फ उन्मुख हुनेछ । सरकार अब कुनै पार्टीको नभएर जनताको हुनुपर्छ नत्र पार्टीले त विकाश गर्ला , देश ले कहिले विकाश गर्न सक्दैन । यथाशीघ्र यस्ता घटना हरु बन्द हुनेछ र फेरी पनि नेपाल एक सुन्दरता र शान्ति को देश हो भन्ने कुरा नेपाली नागरिकमा आशा छ ।
Tags शिबांग दत्त
Previous संविधान दिवसको विरोध गर्दै राष्ट्रिय जनता पार्टीको प्रदर्शन, प्रदेशभरी व्ल्याक आउटपनि
Next कर बिरुद्ध कांग्रेसक आन्दोलन कोना रुकल बुझहीमे नहि आएलः धीरेन्द्र मोहन झा, युवा नेता नेपाली कांग्रेस